site ha na 21-07-16
Isi mmiri iyi - FL410 / FL411
Kemgbe mmalite, Eurborn na-agbaso ụkpụrụ nke "imeghe ihe ziri ezi na ịkwụwa aka ọtọ, ịkekọrịta na uru, ịchụso ịdị mma, imepụta uru", na-agbaso usoro echiche azụmahịa nke "iguzosi ike n'ezi ihe na arụmọrụ, usoro azụmaahịa, ụzọ kachasị mma, valvụ kacha mma ". Anyị kwenyere ...
Eurborn Inground ọkụ - Mee ka ndụ gị ka mma
Eurborn na esoro mmụọ ọrụ nke "Ogo, arụmọrụ, ihe ọhụrụ, na ịkwụwa aka ọtọ". Eurborn nwere ngalaba ebu ya na ngalaba teknụzụ na ngalaba mmepe. All ebu na-emepụta site n'onwe ya, n'ihi ya, ọ nwere ike ịzọpụta ngwaahịa imewe oge na c ...
SPOT LIGHT - Otu Ezinaụlọ
ML1021, PL021, PL023, na PL026 bụ usoro ezinụlọ ndị ọzọ ama ama. Site na edemede ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ọdịdị ahụ site na obere ruo nnukwu karịa. Ike sitere na 1W ruo 6W maka nhọrọ gị. Ngwaahịa a bụ ntụzi aka, ya mere eji ya eme ihe nke ọma ...
BL100-Nhọrọ Gị Lighting Yachting
Na ijikọta ogo dị elu na akụrụngwa, njikwa nlezianya, mkpado ọnụahịa dị mma, nkwado dị mma na nlezianya imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa, anyị na-eme nnyocha iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa kachasị mma. Ọ bụ ins ...
Ka greening na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi jikota
Eurborn etinyela aka na nchedo gburugburu ebe obibi. N’akụkụ ọ bụla dị n’ọfịs anyị, a na-etinye osisi dị iche iche. Akụkụ bara uru bụ na a gbahapụrụ osisi ọ bụla n'otu oge ma mesịa weghachi ya site n'aka onye njikwa anyị iji nye ha ohere ịlọ ụwa.
Ngwaahịa Star - GL116 na ọkụ ala
Ewebata anyị ọkụ na-ere-Family-set lightings, GL116, GL116C, GL116H, GL116Q, GL116SQ. Ọkwa, ma enwere ike 1W, 1.3W, 3W, 3.5W maka ịhọrọ. N'otu oge ahụ, iji gbanwee maka gburugburu ojiji dị iche iche, RGB ma ọ bụ DM nwere ike ịchịkwa ya ...
Light Underground — ọkwa ọkwa GL112
Banyere ọkụ n'okpuru ala / mmiri n'okpuru osimiri GL112, ị nwere ike ịhọrọ ike nke 0.5W, 1W ma ọ bụ 1.3W maka ọkụ GL112 a liri. Ihe niile nke ngwaahịa a bụ nke mmiri nchara igwe 316. Kwadoro oriọna oriọna CREE si na United States ...
Eurborn - Igwe ọkụ, kpachara anya
Mgbe Eurborn lekwasịrị anya na ọkụ nke ọkụ dị iche iche, gụnyere ọkụ ala, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, wdg, Eurborn agaghị eleghara nchekwa onye ọrụ anya. Ya mere, iji meziwanye mmata nchekwa nke ndị ọrụ, Eurborn haziri mgbatị ọkụ na Eprel 20 maka ...
Ihe ndi ohuru a choputara
Eurborn etinyela nnukwu ihe mgbe niile na ihe eji emegharị emegharị ihe. Anyị ejirila onyinye nke okike nye ụmụ mmadụ kpọrọ ihe. N'ihi na anyị n'èzí anaghị agba nchara na-ala ọkụ na ikanam ọkụ mmepe, anyị na-e mere na-eme ka anyị na ngwaahịa mo ...
Akara laser maka ọkụ ala
N'oge gara aga, ejiri akara ink dee akara ngosi ndị dị na ngwaahịa ahụ, mana mbipụta ink adịghị mfe naanị ịmịcha, kamakwa ọ na-adabaghị na gburugburu ebe obibi. Ọ na - ewepụta gas na - emerụ ahụ ...